प्रचण्डको गृहजिल्लामा ओलीको ‘पावर शो’
गत असोज १८ मा ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशनको समापन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– केही फेरबदल भएन भने बुटवलमा १० औँ महाधिवेशन हुन्छ ।
स्वयं एमाले नेताहरू पनि महिनौँ अघिदेखि दशौँ महाधिवेशन बुटवलमा हुने बताउँदै आएका थिए ।
बुटवलमा महाधिवेशन गर्ने ओलीको ‘मुड’ केही दिनपछि नै परिवर्तन भयो ।
र, ४ कात्तिकमा ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गर्‍यो । एमाले बैठकले यो निर्णय गरेदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग जोडेर एमाले महाधिवेशनको चर्चा भएको थियो ।
ओलीले महाधिवेशनस्थल चितवन नै रोज्नुलाई धेरैले ‘प्रचण्डको सेखी झार्न’ खोजेको टिप्पणी गरेका थिए । किनभने चितवन प्रचण्डको गृहजिल्ला हो । यति मात्र होइन अघिल्लो स्थानीय चुनावमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुरको मेयर बनाउन प्रचण्डले ठूलै सकस व्यहोर्नुपरेको थियो ।
भव्य तयारीका साथ चितवनमा आज सम्पन्न भएको १० महाधिवेशनबाट एमालेले प्रचण्डको गृहजिल्लामा ‘पावर शो’ गरेको छ ।
नारायणी किनारमा जे देखियो...
दशौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका लागि नारायणी किनारमा केही दिनअघिदेखि नै भव्य तयारी थियो । हिजो (बिहीबार) देखि देशका विभिन्न क्षेत्रबाट एमाले नेता तथा कार्यकर्ताको चितवनमा बाक्लो उपस्थिति बढ्दै थियो ।
बिहीबार राति नै नारायणगढदेखि सौराहसम्मका होटल भरिएका थिए । ५ लाख मान्छे उद्घाटन सत्रमा उतार्ने उद्घोष एमालेले गरेको थियो ।
शुक्रबार बिहानैदेखि नारायणी किनार भरिभराउ थियो । अध्यक्ष ओली बिहीबार राति नै सौराहस्थित पार्क सफारी रिसोर्टमा बसेका थिए । देशभरबाट आएका नेता कार्यकर्ताहरू बिहीबार बिहानै जुलुससहित विभिन्न सडक हुँदै महाधिवेशनस्थलतर्फ लागे ।
सुरुमा अध्यक्ष ओली सौराहबाट जलमार्ग हुँदै नारायणी किनारा पुग्ने हल्ला चलेको थियो । तर, पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ओली मध्यान्ह कार्यक्रमस्थल पुगे ।
केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सल्लाहकार परिषद र पदाधिकारीलाई मञ्चमा आसन गर्ने व्यवस्था एमाले व्यवस्थापकीय टोलीले मिलाएको थियो । गत प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गर्नेदेखि एकतासम्मको प्राक्टिस सँगै गरेका प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै तयारी गर्न नेताहरूलाई ओलीको निर्देशन थियो ।
चितवनको माडीमा रामसीताको मूर्ति स्थापनादेखि महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओलीले चितवनमा प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन् । जसको निरन्तरता नारायणी किनारमा देखिएको ठूलो मासअघि ओलीले आज पनि गरे ।
जब प्रचण्डमाथि ओली खनिए
उद्घाटन सत्रको पूर्वसन्ध्यामा पोडियम अघि पुगेका अध्यक्ष ओली सुरुमा आफ्नै चर्चा परिचर्चामा थिए । महाधिवेशनले दिएको सन्देश, महाधिवेशनपछिका कार्यक्रम र सरकारको आलोचनामा व्यस्त ओली एकाएक प्रचण्डमाथि खनिए ।
आगामी चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग रहेको बताउँदै आएका ओलीको नजर भने चितवन र प्रचण्डतर्फै आकर्षित देखियो । संसद विघटनदेखि नै चिसिँदै आएको ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध झन–झन चिसिँदै आएको छ ।
जसको पटाक्षेप चितवनको नारायणी किनारबाटै ओलीले आज गरे ।
ओलीले प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै १० हजार पूर्वलडाकु एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी रहेको खुलासासमेत गरे । १० औँ हजार पूर्वलडाकुलाई एमालेमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई झस्काउन भ्याए ।
ओलीले अहिलेसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताउँदै प्रचण्डको नेतृत्वमा पुरानै नाम लिएर एउटा चोइटो गएको बताए । प्रचण्डकै कारण सत्य निरुपण तथा बेपत्ता खोजबिनको काम अड्किएको जिकिर ओलीको थियो ।
प्रचण्डलाई इंकित गर्दै ओलीले भने, ’अनि मन परेका मान्छेलाई दश, दश हजार बाँड्ने रे ! दश, दश हजार मन परेको मान्छेलाई बाँडेर यो समस्याको समाधान हुन्छ ? घाइतेलाई उपचार गर्नुस् । समस्यामा परेकालाई हेर्नुस् ।’
केही समयअघि मात्र ५ दलीय गठबन्धनलाई सत्ता सुम्पिएका ओलीले यो सरकारभन्दा आफू नै पावरफुल भएको बताए । ’हिजो सरकारले गर्न दिएन भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो । तर, आज म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार मेरो हातको कठपुतली हो म नचाइदिन्छु, मै शक्तिशाली, मै पावरफुल भन्दै हुनुहुन्छ’ उनले चुनौती दिँदै नारायणी किनारबाट उद्घोष गरे, ‘किन पावर देखाउनुहुन्न? पावर देखाउनुस् । समस्या समाधान गर्नुस् लडाकुका । म भन्न चाहान्छु, अब यो महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै हामी पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’
साथै, ओलीले प्रचण्डले युद्ध गराएका लडाकुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूलाई फकाउने कोसिस गरे । तर त्यो कुराको प्रहार पनि उनै प्रचण्डमाथि थियो । ’हामी पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ । अहिले मिल्ने भए यहाँ दशौँ हजार प्रवेश गर्न तयार थिए । जनयुद्ध हाँक्ने पूर्वलडाकु तर मेयर र मन्त्री त अरु नै बनेँ ।’ ओलीको भनाइ थियो ।
ओली खनिँदा प्रचण्ड विमानस्थलमा अड्किए
एमाले महाधिवेशनमा एमाले फुटाएर गएका माधव नेपालबाहेकका दलहरूलाई निम्ता थियो । प्रचण्डलाई पनि थियो ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले कार्यक्रम संचालन गर्दैगर्दा प्रचण्डलाई पनि निम्ता दिएको तर काम विशेषले नआएको भन्दै प्रतिनिधि पठाएको बताए ।
तर, ओलीसँग चिसिएको सम्बन्धलाई प्रचण्डले एमालेको मञ्चमा पुगेर सुधार्न चाहेनन् । आजै काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिकाको पार्टी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न जाने निधो गरे ।
तर, विमानस्थलमा गएर ३ घन्टा बसेपछि पनि मौसममा सुधार नभएपछि प्रचण्ड विमानस्थलबाटै फर्किए । दुई गाउँपालिकामा प्रचण्ड आउने भनेर गरिएको भव्य तयारीलाई प्रचण्डले फोनमार्फत नै सम्बोधन गर्न बाध्य भए ।
प्रचण्ड विमानस्थलमा अलपत्र पर्दा यता ओली भने उत्साहका साथ प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रमा आलोचना गरिरहेका थिए । उता, प्रचण्ड भने आफ्नै प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नसकेर फोनमार्फत सम्बोधन गरिरहेका थिए ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि प्रचण्डले गृहजिल्लामा आएर एमालेलाई शुभेच्छा प्रकट गर्ने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले त्यसो गरेनन् ।
अन्तै कार्यक्रम तय गरेका उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै हराए । एमालेसँगको तुष कम गर्न प्रचण्डले नचाहेपछि ओलीले पनि उद्घाटनसत्रभर नै कैयौँ पटक प्रचण्डमा शब्दवाण प्रहार गरिरहे ।
प्रकाशित मिति : मंसिर १०, २०७८ शुक्रबार २०:३९:१९, अन्तिम अपडेट : मंसिर १०, २०७८ शुक्रबार २०:४५:५९